ပန်းမာရ် ပြ ပွဲ (V)(YuanShan EXPO Dome) Taipei International Flora Expo爭艷館 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ပန်းမာရ် ပြ ပွဲ (V)(YuanShan EXPO Dome) Taipei International Flora Expo爭艷館
ပန်းမာရ် ပြ ပွဲ (V)(YuanShan EXPO Dome) Taipei International Flora Expo爭艷館
Posted by zoe on Feb 17, 2011 in Arts & Humanities, Community & Society, Cultures, Events/Fundraise, History, News, Society & Lifestyle, World News |7comments
EXPO Dome International Association of Horticultural Producers (AIPH) Taipei International Flora Exp YuanShan Park Area zoe
ရွမ်ရှန်း ဧရီယာ ဇုံ (Yuanshan Park Area)က EXPO Dome ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပန်းအလှ နဲ့ ဒီဇိုင်း ဖော်ထား တဲ့ in-door ဒယ်ကရေးရှင်း တွေ ပြ ထား ပါတယ် ။ International Association of Horticultural Producers (AIPH) အသိအမှတ် ပြု ပန်းမာရ် ပြိုင်ပွဲဖြစ် တယ် ။ သစ်ခွ ကာနေးရှင်း နှင်းဆီ နဲ့ တခြား ပန်းမာရ် တွေ ကို လဲ ပြထား တယ် ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပန်းမာရ် အရောင်း ဆိုင် များ လဲရှိတယ် ။ ပြပွဲ ပြိုင်ပွဲ ပေါင်း ၄၀၀ ကို ဒီ မှာ ကျင်းပ မှာ ဖြစ် ကြောင်း ။
pavilion ထဲ ကိုဝင်ကြည့်ဖို့ တန်းစီရတယ် ။ လူ တန်း ကလဲ တော်တော်ရှည် တယ် ။ Sat. Sun ဆို ပိုဆိုးတယ် ။ ကြားဖြတ်လို့ မရ ဘူး ။ အဲ မသန်စွမ်း သူ ဆို ရင် တော့ သီးသန့် ဝင် ပေါက် က နေ တန်းမစီ ပဲ ဝင် လို့ ရ တယ် ။
ပြ ခမ်း in-door ဒယ်ကရေးရှင်း တွေ က ရက်အ လိုက် ပြောင်း လဲ နေ လို့ ဗီဒီရို ၂ခု နဲ့ ကိုယ် တိုင် ရိုက် ပုံ ထဲ က ကွာခြား မှုရှိနေ ပါ တယ် ။ မတူ ကြ ဘူး ။
EXPO Dome, which will house floral art competitions, is one of the most stunning exhibition halls at the 2010 Taipei Int’l Flora Expo. The hall is divided into four zones: A, B, C, and Events. Zones A and B are designated for 16 different competitions and special exhibitions, including an International Association of Horticultural Producers (AIPH) – approved indoor flora competition regarded as the Olympics of the horticultural world. In Zone C, foreign and domestic horticultural vendors will promote their businesses and the industry through their public relations booths and engage in discussions and exchanges. Meanwhile, nearly 400 horticultural events, will take place in the Event Zone.
ကိုယ်တိုင် ရိုက်ပုံ တွေ ပို့စ တင် လိုက် တယ် ။
in-door ဒယ်ကရေးရှင်း ပြ ခမ်း ။
ပြခမ်း မ အရောင်း ဆိုင် အချို့။။။။.
ဒီ pavilion မှာ ပန်း အမျိုးပေါင်းတော်တော်စုံပါ တယ် ။ ပို့စ ပေါ်မှာတော့ ကောင်း နိုးရာရာ တွေပဲ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ pavilion အတွက် ပုံ တွေကို ဒီ လောက်နဲ့ဘဲ ဖြတ် လိုက် ပါတယ် ။
ပန်းပုံလေးတွေတော့ လှပါတယ်။ တင်ပြတာ ကြည့်ရတော့လည်း ကိုယ်မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာတခု ကိုယ်ရောက်သလိုဘဲ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
အရမ်းအရမ်းကို သဘောကျပါတယ်။ ဓါတ်ပုံလည်းကြိုက်တယ်။ ပန်းလည်းကြိုက်တယ်။ ကူးယူထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုပေးပါ။
ကြိုက်သလောက် ကူး နိုင် ပါ တယ်။ No problem…
ဂျပန်တွေမှာတော့ ပန်းအလှပြင်တာကို အီကဲဘန ခေါ်တယ်..။
အဲဒါက .. ကျောင်းတွေမှာလည်း သေချာသင်တယ်.။ အင်မတန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရပ်ပါပဲ..။
Flower Arrangement သင်တန်း ဖွင့် တာတော့ ရှိ တယ် ။ ကျောင်း တွေ မှာ သင်မသင် တော့မသိ ဘူး မေး ကြည့် ရ အုန်း မယ် ။ ပန်း ကိုလူနေမှူအများစုမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးတာကို တွေ့ရ တယ် ။ ရုံး တွေ မှာ လဲ အမြဲ စိမ်း ပင် တွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံး ကြ တယ် ။
ပိန်းပန်းတွေကကြွေရောင်တောက်နေတာပဲ . လှလိုက်တော ။ ပိန်းပန်းအစိမ်းကတော့ စပ်မျိုးဖြစ်မယ်နော ။ နှင်းဆီ ဖက်ဖူးရောင်ကလဲ အနားတွန့်လေးတွေနဲ့ .
ကျေးဇူပဲ ဇိုးရေ ။